မန္တလေး | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မန္တလေး ရှိ မှ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
1. ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်မြ့င်မားပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်စဉ် ချောမွေ့စေရန်အတွက် စီမံဌာနမှ လုပ်ငန်းခွင် ကဏ္ဍအား အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ နိုင်ရန်။ 2. သန့်ရှင်းသာယာသောလုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်ပေါ်စေရန်။ 3. စီမံ ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် သော ဌာနဆိုင်ရာ များ အား စနစ်ကျသော မှတ်တမ်း ထိမ်းသိမ်းမှုဖြစ်နိုင်စေရန်။ 4. အလေလွင့် များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်။
1. ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်မြ့င်မားပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်စဉ် ချောမွေ့စေရန်အတွက် စီမံဌာနမှ လုပ်င ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။